Vashandi veHurumende Vonyorera Hurumende Vachinyunyuta neDanho Rekuti Vasabhadharwa Mazuva Avasiri Kuenda kuBasa
Hurumende yakazivisa kuti vashandi vayo vasiri kuenda kumabasa havasi kuzobharwa mazuva avanenge vasina kusevenza.
Mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende, weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, wanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa, Muzvinafundo Paul Mavima, tsamba uchinyunyuta nekwaunoti kubvundutsirwa kwevashandi vehurumende, zvikuru varairidzi ichiti haisi kuzovabhadhara mazuva avasina kushanda.
Izvi zvinotevera danho rakatorwa nevashandi vehurumende rekuenda kumabasa mazuva maviri chete pasvondo vachiti havana mari dzinovakwanira kuti vaende kubasa mazuva mashanu pasvondo.
Tsamba yanyorwa iyi inonzi yanyorerwa kuna VaMavima kuburikidza nemunyori mukuru mubazi ravo, VaJonathan Wutawunashe, uye yasiiwawo kumahofisi emamwe mapazi ehurumende anosanganisira bazi vezvemari, bazi rezvedzidzo yepasi pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika.
Mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Unions, VaGibson Mushangu vanoti zvavari kungoda chete ndezvekuti hurumende ibhadhare vashandi vayo mihoro inokwana uyewo kuti isiye tsika yekuvatyisidzira.
VaMushangu vanokurudzirawo kuti paitwe nhaurirano pakati pevashandi nehurumende nekukasika kuitira kuti zvinhu zvigadzikane mumapazi ehurumende.
Hurumende yakazivisa kuti iri kunyora mazita evarairidzi vose vasiri kuenda kumabasa achizoendeswa kubazi rePublic Service Commission kuitira kuti vasabhadharwa mihoro yemazuva avanenge vasina kushanda.
Hurumende inoti iri kutora danho iri senzira yekusimbisa mutemo unoti anobhadharwa ndeashanda chete. Izvi zviri kuuya panguva iyo vashandi vese vehurumende vari kushanda kwemazuva maviri chete vachiti havana mari dzekufambisa.
Asi gurukota rezvevashandi nemabasa, Muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona kugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo kuburikidza nekuvawedzera mihoro kubva kutanga kwegore, nekudaro havangabvumidze kuti mushandi angofunga kusaenda kubasa obharwa akagara.
VaMavima vanoti kana sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions riine zvichemo rinofanirwa kuzviendesa patafura yenhaurirano zvozeyiwa nekugadziriswa.